ग्यालरी Archives - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
शाहिल खड्काको ‘ सरिम लाउने’ सार्वजनिक, भद्रगोलकि मुन्नीसंग यस्तो देखियो भिडियो( भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं– गायक शाहिल खड्काको नयाँ गीत ‘सारीमै लाउने’ सार्वजनिक भएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको गीतलाई संगीतप्रेमीहरुले निक्कै रुचाएका छन् । पछिल्लो समय भद्रगोलकी कलाकार मुन्नी नामबाट चर्चित कलाकार प्रिया आचार्यको अभिनय रहेको भिडियोमा गायक खड्कालाई पनि गज्जबको अभिनय कला सहित प्रस्तुत गरिएको छ । शब्द संगीत पनि खड्काकै रहेको गीतमा उदयराज पौडेलको एरेन्जमेन्ट, हेमन्त कान्छा रसाइलीको सारंगी रहेको छ। भिडियोलाई दिपक...
चर्चाले अन्जली लाई मात लाग्यो, धेरै कोरियोग्राफरहरुसंग सम्बन्ध चिसिँदै
चलचित्रका अभिनेता/अभिनेत्री हुन् वा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने नर्तक/नृत्यांगना, अलिकति चर्चामा आउनेबित्तिकै उनीहरू एक खालको नखरा देखाउन थालिहाल्छन् । यस्तै घमन्ड मोडल तथा नृत्यांगना अन्जली अधिकारीमा पनि देखा पर्न थालेको बताइन्छ । विगत चार वर्षदेखि म्युजिक भिडियोमा व्यस्त अधिकारी एक वर्ष अघि सार्वजनिक भएको बोलमाया गीतको भिडियोबाट आमदर्शकको नजरमा परेकी हुन् भने गलबन्दीले उनलाई थप चर्चामा ल्यायो । त्यससँगै अन्जलीको पारो चढेको संगीतकर्मीहरू...
नझुक्किनुहोस् यो क्यामेराले खिचेको फोटो होईन , हातले बनाएको चित्र हो
यि तस्बिरहरु चिनिया चित्रकार लेङ्जुङले कोरेका हुन् । ...
आहा ! आजिसाई ( 紫陽花)
टोकियो। टोकियोमा वर्षाको समयमा फूल्ने यो फूल तस्बिर : राजन गौतम् ...
प्रियंका चोपडाको यस्तो हट फोटोसुट ! आखिर किन ?
विश्व रोमान्टिक जोडीको संज्ञा पाएको निक जोनास र प्रियंका विभिन्न कारण चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ । हालै जोनस र प्रियंका इटालीमा आफ्नो प्रेमका पलहरु बिताइरहेका छन । फ्यानहरुलाई ग्ल्यामर पस्किन होस् या रोमान्टिक समय विताउनका निम्ति जोनस र प्रियंका फोटो शुटमा संलग्न भएका छन् र केहि तस्बिरहरु सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका छन् । मसला तयार पार्ने बलिउड गासिप्को भण्डार भन्दा...
जापान आउँदै हुनुहुन्छ ? यि सिप सिकेर आउनुहोस् दुख पाउनुहुनेछैन ( भिडियो )
टोकियो । जापान आउन चाहनेहरुले बारम्बार सोधिरहने प्रश्न र तिनका जवाफहरु ( भिडियो) ...
के गरिन् यस्तो प्रियंकाले ? भाईरल अर्धनग्न तस्बिर
ईटहरी/ गर्मीको मारमा सबैजना परेका छन् । यता नायिका प्रीयंका कार्कीलाई पनि यो गर्मीले सताउन छोडेन । त्यसैले गर्मी भुलाउन आफ्नो नजिकको साथिहरु संग रुपाकोट पुगेकी छिन् । पुगेर गर्मी भुलाउन रुपाकोट रिसोर्टको स्विमिङ पुलमा बिकिनी फोटो खिच्दै आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक र ईन्स्टाग्राममा सार्बजनिक गरेकी छिन् । जहाँ आफू र आफ्ना साथिहरु संग मस्ती गरि गर्मी भुलाईरहेको देख्न सकिन्छ...
क्या गज्जब ! काठमाडौँ ( फोटो फिचर)
काठमाडौँ । सडककिनारमा फुलेका ज्याकराण्डाले थपिदिएको सौन्दर्य ! ...
यस्ति भईछिन् नृत्यले नेपाल चिनाउने तेरिया मगर( फोटो)
काठमाडौँ । तेरिया मगरका यि तस्बिरहरु हेर्नुहोस् ...